भारत प्रशासित काश्मिरको पुलवामामा सीआरपीएफका फौजमाथि भएको हमलापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन् कि उनले जवाफी कारवाहीका लागि सेनालाई पूर्णत छुट दिएका छन् । यो हमला बितेको तीन दशकमा भारतमाथि भएको सबैभन्दा खतरनाक चरमपन्थी हमला हो । यो हमलापछि प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, चरमपन्थी संगठन र उनका सहयोगीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले यो हमलाका लागि पाकिस्तानलाई जिम्मेवार ठहर्रुयाउँदै करारी जवाफ दिने धम्कीसमेत दिएका छन् । मिडियामा पनि आक्रमकताको सुर छ । केही प्रभावकारी टेलिभिजन त बदला लिनका लागि उत्ताउला देखिइरहेका छन् । आत्मघाती कार हमलाको जिम्मेवारी पाकिस्तानी भूमिमा क्रियाशील संगठन जैश–ए– मोहम्मद (जेईएम) ले लिएको छ । अमेरिकासहित केही देशले यो संगठनलाई चरुमपन्थी संगठनको सूचीमा राखेका छन् । यसका संस्थापक नेता मौलाना मसूद अजहरलाई भारतीय सुरक्षा बलले १९९० को दशमा गिरफ्तार गरेको थियो । १९९९ मा दिल्ली आइरहेको विमानकाठमाडौंबाट) अपहरण गरेर कान्दाहार लगिएपछि यात्रीको रिहाईका लागि बदलामा चरमपन्थीलाई भारतले रिहा गरिदिएको थियो । त्यसमा अजहर पनि सामेल थिए । भारतीय प्रशासन हमेसा त्यो विमान अपहरणकाण्डका लागि पाकिस्तानलाई जिम्मेवार ठहर्रुयाउँछ । बितेका केही वर्षदेखि अजहरलाई ‘ग्लोबल टेरोरिस्ट’ का रुपमा चित्रित गर्नका लागि भारतले संयुक्त राष्ट्रमाथि दबाव दिँदै आयो । त्यहाँ पाकिस्तानको साहयोगी देशका रुपमा चीनले हमेसा यो पहलको विरोध गर्दै आयो । पलुवामा हमलामा जेईएमकको संलिप्तताबाट पाकिस्तानको सिधा सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । सन् २००१ मा भारतीय संसदमाथि हमलाका लागि जैशलाई जिम्मेवार ठानिएको छ, सो हमलामा ९ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि दुबै देशवीच हालत यति तनावपूर्ण रह्यो कि केही महिनासम्म युद्धजस्तै स्थिति बनिरह्यो । सन् २०१६ मा पठानकोट एवं उरीस्थित भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानमाथि हमला भयो, त्यसपछि भारतीय सेनाले दाबा गर्रुयो कि उसले लाइन कन्ट्रोलमा रहेको चरमपन्थीको शिविरमाथि ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्रुयो । यसचोटि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्ववाला सरकारलाई ज्यादा केही गर्ने दबाव छ । २०१६ कोसर्जिकल स्ट्राइक धेरै सीमित थियो, समय र टार्गेट दुबै दृष्टिले । जसका कारणले पाकिस्तानले यो (सर्जिकल स्ट्राइक) भएकैमा समेत इन्कार गरेको थियो । त्यसैगरी भारतीय सेना, यो स्वीकार गर्छ कि क्षति पुर्रुयाउनेवाला चरमपन्थी हमलामाथि उसले पाकिस्तानविरुद्ध तत्कालै कारवाही गर्नु परे पनि ऊ सक्षम छ । तर, यो कदमले त्यो खतरालाई बढाउने छ र त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ, जहाँ केवल युद्ध नै सामनेमा हुनेछ । यो डर तब बढ्ने छ, जब दुबैदेशसँग आणविक हतियार छ । पाकिस्तानले यी हतियार प्रयोग गर्ने संकेत पनि कैंयौंपटक दिएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पुलवामा हमलापछि ‘गम्भीर चिन्ता’ जनाउँदै ट्विट गरेर आरोपको खण्डन गरेको छ, जसमा विनाकुनै जाँच भारत सरकार र भारतीय मिडियाले यो हमलामा पाकिस्तानको सम्बन्ध जोडिइरहेका छन् । भलै आत्मघाती हमलाप्रति जैश(एमो हम्मदले जुन प्रकारले जिम्मेवारी लिएको छ र त्यसका संस्थापक मसूद अजहर जुनप्रकारले पाकिस्तानमा स्वतन्त्रतापूर्वक घुमिरहेका छन्, त्यसलाई देखेर भारतीयहरुलाई कुनै अरु सुबतको जरुरत पर्दैन । पाकिस्तानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको गुप्तचर एजेन्सी इन्टर सर्भिस इन्टिलिजेन्स (आइएसआई लाई पनि जैश(ए( मोहम्मदबाट समस्या रही आएको छ । वास्तवमा जैश, लश्कर(ए(तैयबा जस्तो चरमपन्थी संगठन होइन, जसले पाकिस्तानको सेनाको आदेश मानिरहन्छ । जैश पाकिस्तानी सैन्य अड्डामाथि पनि हमला गर्न हिच्किचाउँदैन । सन् २००३ मा यस संगठनले पाकिस्तानका सैन्य शासकपरवेज मुशर्ररफमाथि दुईचोटि खतरनाक हमला गरिसकेको छ । यसका बाबजुद जैशमाथि पाकिस्तानी सेनाले आफ्नो आँखा बन्द गर्दै आएको छ । यसबाट काश्मिरमा तनावपूर्ण स्थिति बनाइराख्नका लागि संगठनको उपयोगिता छ । भलै, अब यो हेर्नुपर्ने हुन्छ कि जैश(एमो हम्मदमाथि के कारवाही हुन्छ ? यसलाई लिएर भारतमाथि धेरै दबाव पर्नेछ । र, चीनसँग पनि यो सम्भव छ । किनकि, मानिँदै आएको छ कि चीन अब अजहरलाई पक्षपोषण गर्नबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसमा सम्भव छ कि यो समूहलाई पाकिस्तानमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । भौगोलिक राजनीतिमा यो आत्मघाती हमलालाई स्थानीयता भन्दामहत्वपूर्ण देख्न सकिन्छ । बितेको एक वर्षमा भारतीय सुरक्षा बलले करिब तीन सय कास्मिरी चरमपन्थीलाई मारेको छ । यसमा बढीजसो दक्षिण कास्मिरका थिए, जहाँ यो हमला भएको छ । यसमा चरमपन्थी समूहका सामुन्ने आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि ठूलो हमला गर्नु आवश्यक बन्न गयो । यो इलाकामा जुन चरमपन्थी समूहको दबदबा छ, जसमा हिज्ब(ऊ( मुजाहिद्दिन, आत्मघाती हमलालाई गैर इस्लामिक मान्छ । यसमा जैश( ए( मोहम्मद र लश्कर(एतै यबामाथि नै यस्तो हमलाको जिम्मेवारी छ । भारतीय सुरक्षातन्त्रका लागि यो गम्भीर गुप्तचरी कमजोरी हो । पुलिस र गुप्तचर एजेन्सीले यो प्रश्नको सामना त गर्नैपर्ने हुन्छ कि जैश– ए मोहम्मद भारतीय सेनाको यति ठूलो डफ्डामाथि आक्रमण गर्न कसरी सफल भयो ? जसमा भारी मात्रामा बिस्फोटक पदार्थराखिएको कारको प्रबन्धदेखि लिएर त्यसको निगरानी, हमलाको पूर्वाभ्यास र कैयन स्तरको सुरक्षा व्यवस्थामा जोडिएका सवालहरु सामेल छन् । यतिबेला भारत सरकार विकल्पहरुमाथि विचार गरिरहेको छ । आर्थिकरुपमा उसले कदम उठाउँदै पाकिस्तानसँग ‘मोस्ट फबर्स नेसन’को दर्जा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यसबाट पाकिस्तानलाई व्यापारिक फाइदा मिल्ने छैन । यसबाहेक भारत सरकार पाकिस्तानलाई राजनीतिकरुपमा पनि अलग(थलग गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर, जबसम्म ज ैश – ए – म ा ेह म् म द म ा िथ पाकिस्तानले कुनै कारवाही गर्दैन, तबसम्म यस्ता अरु हमला हुने आशंकालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । शक्ला बीबीसी हिन्दीका सामरिक विशेषज्ञ हुन् । उनको यो विश्लेषण बीबीसीबाट भावानुवादीत रहेको छ ।